Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM) - UNHCR Egypt
Hawl-wadeennada Hay’adaha UN
waxay ka hawlgashaa Xarunta Taageerada Dib-u-dejinta (RSC) ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika (RSC MENA) si ay u qabato habayn dib-u-dejin – lacag la’aan – Barnaamijka Ogolaanshaha Qaxoontiga Maraykanka ee shan iyo toban waddan oo dhan gobolka MENA. Waxaad la xiriiri kartaa RSC MENA Masar goobta Hagaajinta:
• Nambarka khadka tooska ah: 19472 ama iimayl ahaan [email protected]
Intaa waxa dheer, IOM waxa ay rabta in ay xoojiso fayoobida iyo ilaalinta muhaajiriinta nugul ee Masar iyada oo loo marayo bixinta gargaar ku haboon xaalad kasta oo la siiyo dhibanayaasha tahriibinta, ka badbaaday rabshadaha ku salaysan jinsiga, iyo kooxaha kale ee nugul oo ay ku jiraan:
• Magangalyo-doonka sugaya ballamaha diiwaangelinta ee UNHCR (Waraaqo cad).
• Muhaajiriinta aan damacsanayn inay iska diiwaan geliyaan UNHCR, ama la xiray galalka UNHCR, waxayna ku noolaayeen Masar ugu yaraan 6 bilood.
• MPA waxay bixisaa laba nooc oo adeegyo ah:
• Kaalmada Maxalliga ah: waxa ku jira caawimooyinka soo socda ee ku salaysan qiimaynta
kiis kasta: dhaqan-dhaqaale, guriyeynta, hab-nololeedka, sharciga, waxbarashada, caafimaadka dhimirka iyo taageerada bulsho-bulsheed, Alaab aan cunto ahayn iyo gargaar caafimaad.
• Soo noqoshada iyo Dib-u-celinta Iskaa-wax-u-qabsiga ah ee la Caawiyay (AVRR): IOM waxay siisaa taageerada maamulka iyo saadka, oo ay ku jirto kaalmada dib ulaqabsashada, muhaajiriinta go’aansata inay si iskood ah ugu laabtaan waddankoodii ay ka yimaadeen. Caawimada AVRR lama siin karo kuwa raba inay ku noqdaan wadamada loo arko inay nabad-gelyo la’yihiin.
Khadka Tooska ah ee Ilaalinta iyo Kaalmada Soogalootiga: 010 3204 6064
Axad ilaa Khamiis 9:00 – 12:00
IOM diiwaangelinta: 010 3339 8239
Axad ilaa Arbacada 13:00 – 15:00
IOM email weydiin: [email protected]
Ka warbixi dhaqdhaqaaqyada been abuurka ah: [email protected]
Axad ilaa Arbacada 9:00 – 16:00
Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka Bogga Facebook